राति अबेरसम्म निन्द्रा नलागेर, छटपटी भयो भने ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग दबाउनुहोस् – Khabar Patrika Np
राति अबेरसम्म निन्द्रा नलागेर, छटपटी भयो भने ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग दबाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ समय: २२:४३:१४
काठमाडौं । निषेधाज्ञाका बीच काठमाडौ छोड्न चाहने नागरिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समय उपलब्ध गराएको छ । लामो समय सम्म निषेधाज्ञा हुँदा काठमाडौमा अलपत्र परेकाहरुलाई गन्तब्यमा जान दिनका लागि शुक्रवार राति सम्मका लागि समय दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौको बसपार्क लगायतका क्षेत्रमा गन्तब्यमा जान नपाएर अलपत्र परेकाहरुलाई मध्यनगर राखेर यस्तो सुविधा दिइएको हो ।
जारी निषेधाज्ञाको कारण राजधानीमा अलपत्र भएकालाई गन्तव्यसम्म पुग्न दिन आज रातिसम्म समय उपलब्ध गराएको । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । बसपार्क लगायत नाकाहरुमा सर्वसाधाण अलपत्र परेको देखिएपछि उपत्यका छाड्न आज रातभर अनुमति दिएको उनले बताए ।
अलपत्र परेकाहरुलाई उद्दार स्वरुप सुविधा दिइएको हो । बाहिर जान चाहने सर्वसाधारणले आफू जान चाहेको जिल्लाका स्थानीय निकायको सिफारिस भने अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्ने पनि सीडीओ पराजुलीले जानकारी दिए । तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञा जेठ ३ सम्म लागू गरिएको छ ।